विवाहको ७ फेरा लिनु अगाडि गर्नैपर्ने ८ परीक्षण, नत्र जिन्दगि नै बर्बाद होला ! – Khabaarpati
December 26, 2020 December 26, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on विवाहको ७ फेरा लिनु अगाडि गर्नैपर्ने ८ परीक्षण, नत्र जिन्दगि नै बर्बाद होला !
१. एचआइभी परीक्षण : यदि युवा वा युवतीमध्ये कुनै एकजनामा मात्र एचआइभी संक्रमण रहेछ भने पनि सिंगो जिन्दगी वरवाद हुन्छ । अहिलेको जमानामा आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नु मुर्खत मात्र हुन्छ । बरु विवाह गर्नु अगाडि दुवैजनाले एचआइभी परीक्षण गर्नु बुद्दिमानी मानिन्छ । यसले दुईजनाबीच अझ समझदारी बढाउछ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
५ वी र्य परीक्षण : यस परीक्षणमा पुरुषको वी र्य परीक्षण गरिन्छ । ताकि उनीहरुमा सन्तान उत्पादन गुण छ कि छैन भन्ने थाहा पाइयोस् । कुनै समस्या रहेछ भने उपचार गराउन सकिन्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
८.वंशाणुगत परीक्षण : वंशाणुगत परीक्षणलाई परिवारको मैडिकल हिस्ट्री पनि भनिन्छ । यस्तो परीक्षणले तपाईलाई वंशाणुगत स्वास्थ्य समस्या छ कि छैन भन्ने पत्ता लाग्छ । कतिपय अवस्थामा बच्चाहरुमा वंशाणुगत समस्या देखिने खतरा रहन्छ । यसले तपाईको जीवनलाई मुस्किलमा पारिदिनसक्छ । त्यसैले विवाह अगाडि अनिवार्य वंशाणुगत परीक्षण गराउनुपर्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,